Indawo ka-Jioji & Alisi (Igumbi le-YANUCA) - I-Airbnb
Indawo ka-Jioji & Alisi (Igumbi le-YANUCA)
Ikamelo e-ikhaya ibungazwe ngu-Jioji
U-Jioji uthole izilinganiso zezinkanyezi ezingu-5 ezivela ku-100% wezivakashi zakamuva.
Ngokunikezwayo yigumbi lethu elithi “YANUCA” elingelinye lamakamelo amathathu atholakalayo ekhaya lethu elikhulu lomndeni (bheka ezinye izindlu ukuze ubhukhe ikamelo elithi “Cobia” kanye/noma “Yavu”).
Sitholakala e-Rakiraki Village, ngaphandle kwedolobha lase-Rakiraki.
Ikamelo ngalinye linegumbi lokugezela nendlu yangasese yalo. Izivakashi ziyakwazi ukufinyelela ekamelweni lokuphumula lomphakathi, i-verandah nekhishi.
Sinemisebenzi ehlukahlukene yamanzi neyezwe etholakalayo.
Indawo yethu inikeza okokuzithokozisa kwangempela kwaseFiji okugcwele uhambo olujabulisayo lwaseFiji!
Njengoba uhlala ngaphakathi kwedolobhana uzothola ukuzwa isiko langempela laseFiji nokungenisa izihambi - ngabantu bendawo kanye nokunambitheka kokudla kwendawo okuphekwe yi-Alisi. Isitolo sethu sokutshuza siphinde sinikeze isango lokutshuza elihamba phambili emhlabeni wonke i-Rakiraki eyaziwa kakhulu ngayo - engxenyeni yezindleko zalokho okukhokhiswa ama-resort angomakhelwane. U-Joji unekhono elikhulu lokutshuza (isipiliyoni seminyaka engu-20+) ngakho usezandleni ezinesipiliyoni! Futhi njalo ukulungele ukuhleka nokuzijabulisa ngakho okokuzithokozisa okungenakulibaleka kuqinisekisiwe!
4.86 · 159 okushiwo abanye
Siphila emaphethelweni edolobhana lendabuko laseFiji, elivumela okokuzithokozisa okuyingqayizivele kwaseFiji. Njengoba uzobe uhlala edolobhaneni laseFiji, kuzodingeka uhloniphe ikhanda ledolobhana ngomcimbi we- "sevusevu" ohilela umcimbi we-kava (isiphuzo sendabuko). I-Kava izodinga ukuthengwa yizivakashi ngezindleko ezengeziwe (cishe u- $ 20FJ).
Sivule ikhaya lethu lomndeni kuze kufike ezivakashini ukuze sinikeze okokuzithokozisa kwangempela kwaseFiji, ngakho sizotholakala njalo futhi silungele ukuxoxa njalo noma sixoxe ngokumomotheka okukhulu kwe-Bula. Uzobe uphila futhi uphefumulele ukuphila kwansuku zonke kwaseFiji kodwa uqinisekile ubumfihlo ekamelweni lakho. Uma unezingane ezincane zizokujabulela kahle izingane zethu ezingadlala futhi zizithathe zizungeze izindawo zasemadolobhaneni uma zikulungele!
Sivule ikhaya lethu lomndeni kuze kufike ezivakashini ukuze sinikeze okokuzithokozisa kwangempela kwaseFiji, ngakho sizotholakala njalo futhi silungele ukuxoxa njalo noma sixoxe ng…